Amakhamera Amashadi Okufakelwa Okushisa Okushisayo Nokufakelwa kokushisa amabhethri
Ikhaya / Induction Ukufaka Isithanga / Izinsimbi Billet Zezıhlabane UKWAKHA lembuthuma
Categories: Induction Yenza I-Furnace, Induction Ukufaka Isithanga Tags: aluminium billet ukushisa hot, aluminium eshisa isithando somlilo, billet hot forging, I-Billet Hot Forging Furnace, I-billet ishisa isithando somlilo, ithusi ye-copper billet, induction billet ukushisa hot, Ukufakwa kwe-induction okushisayo, Ama-Metal Billet Hot Forging, Izitsha zamakhamera ezitshulwayo ezishisayo, izinsimbi ezishisayo
Izitsha zamathuluzi okushisa okushisa okushisa nokushisa ukushisa kwebheyili / aluminium / izinsimbi zensimbi zensimbi ngaphambi kokushisa okushisayo
Ukushisa ukushisa isetshenziswa kabanzi embonini ye-billet yokushisa okushisa ukushisa ibillet okumele yenziwe ngokushisa. Embonini yokusebenza yensimbi, ama-hot forging steels ayashisa kumazinga okushisa azungeze i-1000 oC-1250 oC ngokusho kokuqukethwe kwekhabhoni kanye nezici zokuxhuma. Inqubo yokushisa efuna ukushisa idinga ukushisa okushisa okuphezulu kwe-billet ngokufanayo kokubili eceleni kwesigcawu esiphambene nesigaba se-billet. Ngokuvamile ukushisa kokuqala kwe-billet kusekushiseni lokushisa futhi kuyadingeka ukuthi kushise ngaphezu kwezinga lokushisa kabusha lokushisa inqubo yokushisa. Kunezindlela ezihlukahlukene zokushisa insimbi ekushiseni okushisayo kufaka phakathi ukushisa okufakelwayo, igesi elikhishwe isithando somlilo, i-oli efakwe esithandweni somlilo, isithwathwa se-infrared kanye nomshini wokushisa kagesi. Ukushisa kwe-Induction kunezinzuzo ezihlukahlukene kunezinye izindlela zokushisa ekushiseni okushisayo. Okokuqala, ukushisa ukushisa izinhlelo kudala ukushisa okuphezulu kakhulu lapho kuchazwa ingxenye yensimbi. Ukwengeza, izinhlelo zokushisa ukushisa ziqala izinhlelo ngokushesha, ngoba lezi zinhlelo azidingi ukuchitha isikhathi sokushisa kwesithando somlilo. Kanti futhi, isikhathi sokushisa sincane ngokungahambisani nezinye izindlela. Uma kuqhathaniswa nokushisa kwesithando segesi nesoyela, ukulawula nokuphindaphinda isimo esifanayo sokushisa isikhathi esithile kufinyeleleka kalula. Ukuzenzekelayo kungasetshenziswa ohlelweni lokushisa lokufakelwa. Kuzodinga isikhala esincane esitolo sesitolo. Ukushisa ukushisa libuye lisebenzise amandla amaningi futhi linobungane obumvelo. Ngeke kube khona ukushisa komlilo okulimazayo emvelweni njengokushisa kwegesi nokwenziwe ngamafutha. Ngaphezu kwalokho imiphumela yocingo ekhishwe yigesi enekhwalithi ephezulu yomhlaba ngenxa yokwakheka kwezinga. Ukushisa okufakelwayo kuhlinzeka ngokunciphisa okukhulu ekubunjweni kwezinga kanye nokwehliswa kwemali kwi-billet evuthayo.
I-parameter yezinsimbi zensimbi ye-billet eshisa ngomlilo:
Esikhathini sokungeniswa kwensimbi billet eshisayo isithando somlilo wonke amabhande noma slug isha. Ngokuvamile amabhandeki amancane noma ama-slugs i-hopper noma isitsha isetshenziselwa ukuletha ngokuzenzakalelayo amabhethri emgqeni wokugcoba ama-roller, amayunithi aqhutshwa ngamaketanga noma kwezinye izimo zamaphrophethi we-pneumatic. Ama-billets abese eqhutshwa ngekhoyili ngemuva komunye emigqeni epholile yamanzi noma e-ceramic liners asetshenziswa ngokusebenzisa i-coil bore okunciphisa ukungqubuzana nokuvimbela ukugqoka. Ubude bekhoyili buyimisebenzi yesikhathi esidingekayo, isikhathi sokujikeleza ngasinye sici nobude billet. Ngomthamo omkhulu isikhulu esiphambanweni sisebenza akuyona into engavamile ukuba nezinhlamvu ze-4 noma ze-5 ochungechungeni ukunikeza i-5 m (16 ft) yekhoyili noma ngaphezulu.